“Xiddigaha Chelsea way ooyeen kaddib markii Jose Mourinho la ceyriyay” – John Terry – Gool FM
“Xiddigaha Chelsea way ooyeen kaddib markii Jose Mourinho la ceyriyay” – John Terry
(London) 24 Abril 2020. Xiddigii hore kooxda Chelsea ee John Terry ayaa shaaca ka qaaday xaaladii murugada aheyd oo ay galeen ciyaartoyda Blues, kaddib markii shaqada tababarka ee Chelsea laga ceyriyey Jose Mourinho sanadkii 2007, kaasoo haatan maamula naadiga Tottenham Hotspur.
John Terry ayaa u sheegay shabakada “Sky Sports” ee dalka Englan, kaddib wareysi uu ku bixiyay:
“Dhamaanteen waan ilmeynay, wuu inoo yimid wuxuuna nagu yiri, waa lay eryay, kaddibna mid kasta oo naga mid ah ayuu xabadka geliyay”.
“Nimankii oo dhan way ooyeen ilaa ilmada ay ka soo qubato indhahooda, waxaana dhamaanteen is weydiinay waxa aan sameyn doono marka xigta?, wuxuu ahaa sida aabe iyo hage”.
“Madaxweynaha ayaan la hadalnay oo waxaan ku niri, waxaan rabnaa inuu joogo, ma la soo celin karaa? Isagu waa kan ugu fiican ee aan la shaqeyn karno, laakiin nasiib darro iyagu mar hore ayay maskaxdooda go’aan ka qaateen” ayuu yiri Xiddigii hore kooxda Chelsea ee John Terry.
Kevin De Bruyne oo shaaca ka qaaday labada xiddig uu jeclaan lahaa inuu ka garab ciyaaro